Kodzero-dzevanhu, 02 Kurume 2019
Mugovera 2 Kurume 2019
Nhaurirano dzeMapato Dzirikukokerwa naVaMnangagwa Dzotangazve Nhasi Pasina VaChamisa
Makomiti mana akaumbwa svondo rapera nemapato ezvematongerwo enyika akapinda musangano wekugadzirisa matambudziko ari munyika wakashevedzerwa nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa, ari kutarisirwa kutanga basa nhasi kuburikidza nekuita misangano.
Vanhu Vaviri Vakafa Vaburiswa neChina Mumigodhi kuBattlefields
Mitumbi miviri yevanhu vange vachiri pasi pemigodhi mushure metsaona yakaitika kuKadoma masvondo maviri apfuura, yawanikwa neChina mangwanani mumugodhi we Cricket Mine.
Botswana Yotsigira Makambani Ayo Anoda Kutanga Mabhizinesi muZimbabwe
Vachitsanangura zviri muchibvumirano ichi, gurukota rinoona nezvekutengeserana muBotswana, Va Bogonelo Kenewendo, vati mari yabvumiranwa iyi ichashandiswa nemakambani emu Botswana anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe.
Varairidzi Vogununu'na neDanho reHurumende Rekuda Kuvabatira Mazuva Avo neNyaya yeKuratidzira
Sangano revarairidzi rePTUZ, rinoti harisi kufadzwa nemashoko anonzi ari kubva kuPublic Service Commission ekuti ichatorera varaidziri vanodarika zviuru gumi matanho anosanganisira kuvatorera mazuva kubva pamazuva avo ekuzorora.
MDC Yoshora VaMnangagwa neNyaya Yekutadza Kurwisa Huori
Mutauriri webato rinopikisa reMDC VaJacob Mafume vari kushora zvikuru hurumende nekwavanoti kutadza kunyatsorwisa huori kunyangwe hazvo muhofisi yemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa makaiswa imwe komiti inofanira kunge ichirwisa huori kana kuti Special Anti-Corruption Unit.
Mutungamiri weBotswana, VaMokgweetsi Masisi, Voshanyira Zimbabwe
Mutungamiri weBotswana, VaMokgweetsi Masisi, vasvika munyika umo vari kutarisirwa kupinda mumisangano neChina wekuchanyorerana zvibvumirano nemumwe wavo, VaEmmerson Mnangagwa.